PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Bawufuna ezinkulisa uGrade R
Bawufuna ezinkulisa uGrade R
INHLANGANO yabafundisa ezinkulisa, iSouth African Creche Workers Union, ifuna ukuthi uGrade R ubuyele ezinkulisa ukhishwe ezikoleni ngoba abafundi basuke besadinga ukunakekelwa.
Amalungu ale nhlangano amashele esiShayamthetho KwaZulu-Natal eMgungundlovu ngoLwesihlanu ehambisa uhlu lwezikhalo ekhala kakhulu ngokuphucwa uGrade R.
Le nhlangano ithi abafundi basuke bengakakulungeli ukuba sezikoleni. Bafuna izikole ziqale kwaGrade 1 kuya kwaGrade 12.
UNksz Nonhlanhla Shange, uSihlalo wenhlangano, uthe isizathu esenza bafune uGrade R ubuyele ezinkulisa wukuthi abafundi basuke besebancane ngakho abanakwa ezikoleni. Uthe abafunda uGrade R basuke beneminyaka emihlanu ngakho basuke besadinga ukunakekelwa ezinkulisa.
“Sifuna uGrade R ubuyele ezinkulisa ngokugcwele nohulumeni akhokhele uthisha njengoba enza kwabafundisa leli banga ebakhokhela,” kusho uNksz Shange.
Okwamanje uGrade R awukafakwa ngokusemthethweni ezikoleni njengoba kuyimpoqo ukuthi umfundi aqale ukufunda kwaGrade 1.
Yingakho othisha abafundisa uGrade R abanye babo bengaqashiwe ngumnyango ngokugcwele. Abanayo i-medical aid, provident fund ne-housing allowance abangaqashiwe ngokugcwele.
Bahola uR6 500 KwaZulu-Natal kanti abazange banyuselwe umholo. Kusukela ngoDisemba nyakenye uMnyango wezeMfundo esifundazweni uthembise ukuthi uzobanyusela umholo.
UNksz Shange uthe kukhona umkhuba osuwenziwa othishanhloko abamukela abafundi abaneminyaka emine.
“Siyawazi lo mkhuba wokuthi bamukele abafundi abancane. Basiphuca iqatha emlonyeni ngoba izingane ezincane okumele ngabe zisafunda enkulisa. Ezinkulisa siyakwazi ukubhekana nezingane ezincane ngoba yinto esiyifundele uma uqhathanisa nothisha abasuke befuna umuntu osekhulile,” kuqhuba uNksz Shange.
Uthe bangaphansi kweCosatu wathi abalelwa ku-1 000 amalungu amashele esiShayamthetho.
Uhlu lwezikhalo lwamukelwe nguMnuz Nkululeko Ngcamu osehhovisi likaSomlomo uNkk Lydia Johnson.
UNksz Shange uthe banike uSomlomo izinsuku eziyisikhombisa.
Izinyunyana zothisha esifundazweni zihlale ziyilwa eyokunyuselwa umholo kothisha bakwaGrade R njengoba eGauteng kuthiwa bahola uR10 000 ngenyanga.
Kuthintwa uMnyango wezeMfundo ngalolu daba, uMnuz Kwazi Mthethwa uthe iSouth African Creche Workers Union ibaluleke kakhulu eMnyangweni wezeMfundo bayasizwa isikhalo sayo. “Sizohlala phansi sisicubungule bese sibuyela kubona,” kuphetha uMthethwa.
ABASEBENZA ezinkulisa KwaZuluNatal bamashele esiShayamthetho bekhala ngokuthi bafuna uGrade R ubuyiselwe ezinkulisa ukhishwe ezikoleni